BountyHunter - automated Bounty ပလက်ဖောင်း | Airdropics
BountyHunter - automated Bounty ပလက်ဖောင်း
BountyHunter - automated Bounty ပလက်ဖောင်း5 минут чтения
Сейчас мы попробуем разобрать очередной проект под названием BountyHunter - ပုဂ္ဂလိကရုံးနှင့်အတူ Bounty automated ပလက်ဖောင်း, где вы сможете мгновенно и без труда, заработать токены и криптовалюты проектов и получать стабильный доход.
စာနယ်ဇင်း→ Becomeamember.
2. ပထမနာမည် - သင့်နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ.
3. E-Mail က — введите вашу электронную почту.
4. Пароль - စကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးပါ.
5. စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ — повторите пароль.
7. စာနယ်ဇင်း→ မှတ်ပုံတင်ခြင်း.
5. Back office — это ваша партнёрская ссылка, သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်များအတွက်.
6. ပရိုဖိုင်းကို — это ваш профиль с данными.
Форум на ကွမ်းခြံကုန်း.
Официальная группа в ကွေးနနျးစာ.
2. Далее → ချိန်ညှိချက်များ.
E-MAIL - အီးမေးလ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ETHEREUM— введите ваш адрес Ethereum ငှေအိတျ, с поддержкой ERC-20.
စာနယ်ဇင်း→ သိမ်းဆည်းပါ, для сохранение.
စင်မြင့်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ BountyHunter: https://airdropics.com/BountyHunter
Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးပါ → MyСrypto
Tags: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Tokens, Cryptocurrency, BountyHunter, ငှက်ပျောသီး
Previous PostBountyHub - automated Bounty ပလက်ဖောင်း
Next PostDropTheBomb - automated Bounty ပလက်ဖောင်း